Iindaba -Iindlela ezi-4 zokucofa ukubanakho kwedatha kwaye uyisebenzise ukuphucula impilo yoluntu kunye nokhuseleko
Iindlela ezi-4 zokucofa amandla edatha kwaye uyisebenzise ukuphucula impilo yoluntu kunye nokhuseleko
Emuva xa uBill Gardner wajoyina inkonzo yomlilo kwindawo yasemaphandleni eTexas, weza efuna ukwenza umahluko oqinisekileyo. Namhlanje, njengentloko yomlilo ethathe umhlalaphantsi, ivolontiya lomlilo kunye nomphathi omkhulu weemveliso zomlilo ze-ESO, uyayibona loo minqweno nakwisizukulwana sanamhlanje esizayo. Ukongeza kwifowuni yokusebenzela, bazisa isidingo sokuqonda ukuba iinzame zabo ziyichaphazela njani imishini kunye neenjongo zesebe labo. Bafuna ukwazi impembelelo abayenzayo, kungekuphela ngokufezekiswa buqu kunye namabali obuqhawe, kodwa ngokubandayo, idatha enzima.
Ukulandelela idatha kwiziganeko ezifana nemililo yasekhitshini kunokunceda ukumisela izinto eziphambili ngokubaluleka kwimfundo yoluntu. (umfanekiso / Getty)
Amasebe amaninzi aqokelela ulwazi malunga neziganeko zomlilo kunye neempendulo, abacimi-mlilo kunye nabonzakeleyo, kunye nelahleko yepropathi ukunika ingxelo Inkqubo yeSizwe yokuNika ingxelo ngezehlo zomlilo. Olu lwazi lunokubanceda ukuba balandele kwaye balawule izixhobo, babhale uluhlu olupheleleyo lomsebenzi wesebe kunye nokucacisa uhlahlo-lwabiwo mali. Kodwa ngokuqokelela idatha ngaphaya kwemigangatho yeNFIRS, iiarhente zinokufikelela kubuncwane bokubona kwexesha lokwenyani ukwazisa ukuthatha izigqibo kunye nokunceda abagcini mlilo, abahlali kunye nepropathi.
Ngokwe- Uphando lweSizwe loMlilo lweDatha, idatha "yokuqokelela ikhule ngaphaya kwedatha yesiganeko kwaye indlela ebanzi yokuqhagamshela yonke idatha yomsebenzi womlilo iyafuneka ukuqinisekisa ukuba amasebe omlilo asebenza ngedatha ebangela umfanekiso opheleleyo wezinto abazenzayo."
UGardner ukholelwa ukuba idatha eqokelelwe yi-EMS kunye neearhente zomlilo inexabiso elibalulekileyo elihlala lingasetyenziswanga.
"Ndicinga ukuba iminyaka, besinolwazi kwaye yayiyimbono yobubi obuyimfuneko ukuba omnye umntu wayefuna olo lwazi, okanye kwakufuneka ukwenza uhlobo oluthile lwesizathu sobukho bethu," utshilo. "Kodwa nyani, iyafuneka ukukhokela ekufuneka sikwenze kwaye isikhombise apho kufuneka siye khona kwiarhente nganye."
Nazi iindlela ezine ezinokuthi umlilo kunye neearhente ze-EMS zinokusebenzisa idatha yazo:
1. UKUTHENGISA UMNGCIPHEKO
Umngcipheko luhlobo olukhulu, kwaye ukuqonda ubungozi bokwenyani kuluntu, amasebe omlilo kufuneka aqokelele idatha ebanceda baphendule imibuzo efana nale:
Zingaphi izakhiwo ezikhoyo kwindawo okanye ekuhlaleni?
Sakhiwa ngantoni esi sakhiwo?
Zeziphi izinto eziyingozi ezigcinwa apho?
Athini amanzi angena kweso sakhiwo?
Lithini ixesha lokuphendula?
Kugqityiwe nini ukuhlolwa kwaye ulwaphulo-mthetho luyalungiswa?
Zindala kangakanani ezo zakhiwo?
Zingaphi iinkqubo zokucima umlilo ezifakiwe?
Ukuba nolu hlobo lwedatha kunceda amasebe ukuvavanya ukuba yeyiphi na imingcipheko ekhoyo apho anokuthi abele izibonelelo ngokufanelekileyo kwaye abeke phambili iindlela zokunciphisa, kubandakanya nemfundo yoluntu.
Umzekelo, idatha ingabonisa ukuba ngaphandle kwe-100 yeengxelo zomlilo ngonyaka, ezingama-20 zazo zisebenza imililo- kwaye kuloo 20, 12 yimililo yekhaya. Kwimililo yekhaya, isibhozo siqala ekhitshini. Ukuba nale datha yegranular kunceda amasebe ukuba angene ekuthinteleni imililo yasekhitshini, enokuthi ibangele uninzi lwelahleko yomlilo ekuhlaleni.
Oku kuya kunceda ukuthethelela inkcitho yesixhobo sokucima umlilo ukuba sisetyenziselwe ukufundisa uluntu kwaye, okona kubaluleke kakhulu, imfundo yoluntu iya kuwunciphisa kakhulu umngcipheko wemililo yasekhitshini.
"Ukuba ufundisa abahlali ukuba basisebenzise njani kwaye basebenzise nini isicima-mlilo," utshilo uGardner, "iyakutshintsha yonke ingozi kunye neendleko ezihambelana nayo kwindawo ohlala kuyo."
2. UKUPHUCULA UKHUSELEKO LWABATHUTHI
Ukuqokelela idatha yolwakhiwo malunga nemililo yolwakhiwo ayincedi kuphela kukhuseleko lwabacimi mlilo ngokuvumela abasebenzi ukuba bazi ukuba kukho izinto eziyingozi ezigcinwe kwindawo leyo, inokunceda abacimi-mlilo ukuba bakuqonde ukubonakaliswa kwabo kwimizimba ebangela izifo.
Yonke imihla, abacimi-mlilo baphendula kwimililo ekhupha izinto esaziyo ukuba zibangelwa ngumhlaza. Siyazi kananjalo ukuba abacimi-mlilo banepesenti ephezulu kwiintlobo ezithile zomhlaza kunabantu ngokubanzi, utshilo uGardner. "Idatha isincedile ukuba sihambisane nomgangatho wokunyuka komhlaza kunye nokuvezwa kwezi mveliso."
Ukuqokelela loo datha kubo bonke abacimi-mlilo kubalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuba abacimi-mlilo banezixhobo abazidingayo ukunciphisa ukubonwa kunye nokususa ukungcola ngokukhuselekileyo, kunye nokujongana nazo naziphi na iimfuno zokhathalelo lwempilo ezinxulumene nokuvezwa.
3. UKUHLANGABEZANA NEEMFUNO ZOMMANDLA WABO
Ukungxamiseka kweswekile sisizathu esiqhelekileyo seminxeba ye-EMS Iiarhente ezinenkqubo yoluntu ekuhlaleni, utyelelo lwesigulana seswekile linokuhambisa izibonelelo ezandayo ngaphandle kokusombulula ingxaki yeswekile. Ukuqinisekisa ukuba isigulana sinokutya okanye sinxibelelana nezixhobo ezinje Ukutya kwiivili -Kwaye banamayeza abo kwaye bayakwazi ukuwasebenzisa-lixesha nemali echithwe kakuhle.
Ukunceda isigulana ukulawula isifo seswekile kunokuthintela uhambo oluya kwigumbi likaxakeka kwaye kuncede isigulana siphephe isidingo se-dialysis kunye neendleko kunye nefuthe lokuphila elinxulumene nayo.
"Siye sabhala ukuba sichithe amawaka ambalwa eedola kwinkqubo yoluntu yezonyango kwaye sagcina amakhulu amawaka eedola kunyango," utshilo uGardner. “Kodwa okona kubaluleke kakhulu, sinokubonisa ukuba senze igalelo kubomi bomntu nakwintsapho yakhe. Kubalulekile ukubonisa ukuba siyawenza umahluko. ”
4. UKUXELELA IBALI LE-AGENSE YAKHO
Ukuqokelela kunye nokuhlalutya i-EMS kunye nedatha yearhente yomlilo ikuvumela ukuba unike ingxelo ngokulula kwi-NFIRS, ucacise inkcitho okanye ukwaba izixhobo, kwaye kubalulekile ekubaliseni ibali learhente. Ukubonisa ifuthe learhente eluntwini, zombini iinjongo zangaphandle ezinje ngenkxaso mali kunye nolwabiwo mali, kwaye ngaphakathi babonisa abacimi mlilo ukuba benza umahluko eluntwini kuko okuya kuqhuba iiarhente ziye kwinqanaba elilandelayo.
"Kufuneka sikwazi ukuthatha idatha yezehlo kwaye sithi nantsi iminxeba esiyifumanayo, kodwa okona kubaluleke kakhulu, nali inani labantu abavela kwezi zehlo sizincedileyo," utshilo uGardner. "Nali inani labantu kwindawo esihlala kuyo, ngelaxesha labo lalisesichengeni, sasikhona sizokwenza umehluko kubo, kwaye sakwazi ukubagcina eluntwini."
Njengoko izixhobo zokuqokelela idatha ukuvela kokusebenziseka lula kunye nobunkunkqele kwaye isizukulwana esitsha singena kwinkonzo yomlilo sele siqonda ukufikelela ngokulula kwedatha, amasebe omlilo asebenzisa amandla edatha yabo aya kuba nakho ukuqonda okufunekayo ukwenza izigqibo ezingcono kunye nolwaneliseko lokwazi impembelelo abayenzileyo.